bamazisa uKristu, Babonise Uzuko — UHAMBO LEE
bamazisa uKristu, Babonise Uzuko
Le vidiyo kunye ngqangi uvela kwiSeshini Gabalala Uhambo Jonga iNkomfa lifa 2013.
Umxholo yale nkomfa Soli Deo Gloria, okanye uzuko kuThixo yedwa. Nantso umxholo omkhulu. Yaye sifuna ukuba ngokwembono - ukuba zonke uzuko liphela bobabo kuThixo yedwa, ukwazisa yonke into esimele siyenze. Ngeli ixesha lam ngokuhlwanje, Ndifuna ukuba bacinge ngendlela loo yazisa sokuvangela yethu.
Ukuxelela abantu ngoYesu Kubonakala ukuba yenye yezinto ukuba sonke ukuba sifanele senze ntoni, kodwa sonke bazive benetyala ngokungenzi ngokwaneleyo. Ndilungile? Mna ndedwa ngaloo? Nakuba nje kule veki igqithileyo, Ndandiziva enetyala kuba ulwalamano ndaqalisa ukwakha omnye ummelwane wam uye uhlobo baqalisa iwe. Mna akubanga Mandinazise ngabom ngayo ekwakheni ngaloo ubudlelwane, kwaye aqhubeke zama ukuxelela kuye ngoYesu. Yaye kubonakala ngathi ndiziva ngale ndlela badla. Umbuzo ndifuna ukubuza nto? Liliphi intliziyo zifuna ukulungiswa? Ndidinga engqondweni yam nihlaziywe. Kufuneka sikhumbule ukuba kutheni ndiza kukwenza oko.
Ngoku akukho mathandabuzo ukuba lokushumayela kuyandoyikisa kwaye nzima nzima. Kwaye yiloo nto kanye eqhubeka ezintliziyweni zethu. Kuthekani ukuba abanye abantu bavakalelwa ngayo? Ukuzama ukweyisela umntu ukuba sele aboni abafuna uMsindisi kwaye ukuba uYesu kuphela indlela, Kubonakala ngathi ulwaphulo imbi iphela nenkcubeko "ukuyekelela" yethu. Yinto ekhubekisayo.
Ngoko kutheni sifanele kushumayela iVangeli? Thina ukuvula imilomo yethu kwaye akukho mntu ufuna ukuva oko. Abantu sithiye ngayo. Abantu bathi siza emva kwamaxesha. Abantu bathi siza ebambelele endala lixesha incwadi ngeembono lixesha. Sihlala kwindawo emnyama, lonakeleyo hlabathi. Ngoko kutheni? Ngaba ukuchitha ixesha lethu
Siya no va uyasazi isizathu esiyenzayo loo nto, okanye siza sinikezele. Ngaba eshumayela iVangeli ukuze sikwazi ukunyanzela wonke umntu ukuba abe ngathi? Ingaba kungenxa yokuba sele bigots abacinga sibe ngaphezu wonke umntu? Ingaba kungenxa yokuba sonke sifuna uhlobo lwethemba ukubambelela noYesu baya kwenza? Hayi. Sishumayela iVangeli kuba sifuna abantu ukubona uzuko lukaThixo. Kwaye sibona ukuba uzuko uNyana Wakhe.
Ukuba uhambe ngento enye makubenjalo ukuba. Thina sishumayela uKristu ukuze abantu bakwazi ukubona uzuko.
Abaxhomekeki kwiziyobisi ukufumana aphezulu kuba musa baqonde ubuqaqawuli bukaThixo. Rappers lilinyelise igama lakhe bakha kwinqanaba noYesu, ngokuba abayi baqonde ubuqaqawuli bukaThixo. Dudes Young kuluntu lwethu kutolwe omnye, ngokuba abayi baqonde ubuqaqawuli bukaThixo. manenekazi Young babekholose kubudlelwane kuba musa baqonde ubuqaqawuli bukaThixo. abanalo bazibulala ngenxa yokuba akukho themba, ngokuba abayi baqonde ubuqaqawuli bukaThixo. Abantu baya esihogweni kuba abangakubonanga uzuko lukaThixo kwiGospile wakholosa kuKristu. Ukubona uzuko imicimbi kaThixo, kwaye sifuna ukuba babone ukuba.
Xa sifumana akrotyiswe kuzuko lukaThixo kuKristu, siyakuba soze abe mnye. Ngoko ke ndicinga ukuba kuthetha ntoni ukunceda abantu wolubona uzuko lukaThixo kwihlabathi emnyama, apho abantu musa ndifuna ukwazi kuye.
Umpostile uPawulos wayesazi kakuhle ukuba kunjani ukukhonza phakathi kwabantu bamthiya, iVangeli yakhe. Sidla ucinge ukuba uPawulos uhleli kwindawo elunxwemeni ngeenyawo zakhe up philosophizing njengoko ubhala ezo leta. Hayi, UPawulos uhlala kwihlabathi kwenene nobunzima lokwenene - ihlabathi ukuba ngeendlela ezininzi kakhulu nzima ngaphezu kuneyethu. Yaye le leta ibhalwe kuloo meko.
ncwadi yesibini uPawulos uyibhalele ibandla laseKorinte kukuba ngeendlela ezininzi ukuziphendulela kunye nenkcazelo ubulungiseleli bakhe ubuso inkcaso. Kutyhila kunye nam 2 Korinte 4:1-6.
ngoko ke, sinalo nje olu lungiselelo ngenxa yenceba kaThixo, singaphulukani intliziyo. 2 Sisuke sazilahla elihlazo, iindlela ezifihlakeleyo. Siyala ukuqhelisela wengcibi okanye abhucabhuce ngelizwi likaThixo, kodwa ingxelo open inyaniso siya siyawaqala siziyaleze isazela wonke emehlweni kaThixo. 3 “Kaloku ukuba iindaba ezimnandi esizishumayelayo azicacanga, koba azicacanga kuphela kwabo baya kwantshabalalo. 4 Kwimeko yabo uthixo weli phakade wazimfamekisa ngaphakathi kwabo iingqiqo zabangakholwayo, ukuba ubagcine kuyo ndibona isikhanyiso seendaba ezilungileyo zobuqaqawuli bukaKristu, ongumfanekiselo kaThixo. 5 Kuba into sivakalisa thina ziqu, kodwa uYesu Kristu iNkosi, kunye thina sizivakalisa ukuba singabakhonzi benu ngenxa kaYesu. 6 kuba uThixo, owathi, "Makuvele ukukhanya ebumnyameni,"Okhanyisele iintliziyo zethu, ukuze kukhanye ukwaziwa kobuqaqawuli bukaThixo ebusweni bukaYesu Kristu. (2 Korinte 4:1-6)
Ukuba likholwa yeVangeli, uye wabizwa ukuba abe ngumlungiseleli yeVangeli. Ngoko ndifuna ukujonga umzekelo kaPawulos kwaye ndifuna ukuba babugxininise izifundo ezine ubulungiseleli kwihlabathi emnyama
mna. Musa elirhoxisa Ngenxa kukhatywa kwe Men (1-2)
Engafunwa kunzima. Sonke Ndiye ndazibonela oko. Yinto yemvelo ukuba abantu ukuba mayingakhuthazwa, kwaye ayinakulimaza, naxa banyusa umntu okanye into enye kwaye umntu oluzijikela phantsi. Ukususela amakhwenkwe kwibakala lesixhenxe becela intombazana lomdaniso, ukuba akukho ebesiyenza kuloo kwikholeji wenza isicelo sokuba, ukuba bangafumani ukuba umsebenzi oko wayekufuna, kulahlwa kunzima.
Umpostile uPawulos wathetha nentabalala yokugxothwa nenkcaso kubulungiseleli yakhe yeVangeli. Kangangokuba emininzi iileta zakhe uye wanyanzeleka ukuthethelela mlinganiswa wakhe kunye neendlela zakhe, isigidimi sakhe. status ngelakhe impixano.
Ngaba cinga nje kwisigxina kaPawulos? Wena waya eKorinte, kule ndawo zithixo zobuhedeni, kwaye washumayela iindaba kubo. Wena wabathanda. noko ke ngoku, ezinye namarhe oyihlwayeleyo iimbewu amathandabuzo ezingqondweni zabo. Ndiyathingaza ngani, neenjongo zakho, nokufundisa bakho. ukuba kubuhlungu.
Kodwa njani uPawulos? Jonga ivesi 1.
“ngoko ke, sinalo nje olu lungiselelo ngenxa yenceba kaThixo, singaphulukani intliziyo.”
A. Musa ukuziva Heart
UPawulos uthi yena bangethi. Uye uthi uye singatyhafiswa nangona yokuba uye wajamelana inkcaso enjalo. A nga ekuzukisekeni edandathekileyo, bayinikela, kwaye gangalala ngetawuli okanye wafumana into enye ukuba anikele ngobomi bakhe ukuze. Yena akazange umhlala kwaye wagqiba kwelokuba abe usiyazi endaweni. Leyo emangalisayo, ucinga oko kuchaswa ezifana. Ingqalelo yonke uPawulos waya. Ukusuka entolongweni, ngamatye, ukucekisile. UPawulos nangoku akapheli intliziyo; leyo kanye oko kubangela ukuba ufune ukwenza.
Ngaba wakha wabelana iVangeli nomntu yaye kubo Balithiyile? ndine. Ndiya unokucinga amaxesha xa abantu bathi akuyomfuneko uThixo, okanye bexambulisana nam wathi kum uThixo wenene, okanye abantu baqala ukwenza ezinga uphephe nam emva kokuba wabelana nabo, nokuba abantu zokuphikisa bakhalaza kum umnwe. Njani namlingayo ukuphendula loo? Mhlawumbi Ndingathanda usenokufuna ukulwa, kodwa andikwazi ukulwa. Uninzi kuthi sihendwa ukuba mayingakhuthazwa, nikuyeke. Ngubani ofuna ukugcina obalekela ndaxheleka emphefumlweni?
Ngoko xa mazwi kaPawulos Masifunde esithi yena bangethi. Ndiyavuya nqa. Ndifuna ukwazi ukuba njani na. Kutheni na ke singethi? Usixelela kanye apha kule vesi.
UPawulos akawulibali intliziyo ngenxa yobukhulu ubulungiseleli ukuba uThixo uye kuye. Kanye phambi kokuba oku sahluko 3, UPawulos uchitha unesiqhuma ixesha echaza uzuko ubulungiseleli New yomnqophiso. Ubuqaqawuli engomnye kwabo kweli cala womnqamlezo, abayifumeneyo ukushumayela usindiso lubabalo ngokukholwa kuYesu.
ukhuthazo uPawulos luvela entsimini ngokwayo, akayi nempumelelo indlela avakalelwa nangaliphi na ixesha. Uye Unombulelo ongazenzisiyo ngokuba wakhethwa ngenceba kaThixo ukukhonza ngale ndlela. Avakalelwa nelungelo. Inyaniso, uchaza ukuba olu ubulungiseleli omtsha umnqophiso kona nobuqaqawuli ngaphezu ubulungiseleli umnqophiso omdala kaMoses. Wathi uPawulos uyazi ukuba kukho inceba kaThixo ukuba bonke abantu baya kuba olu lungiselelo. Indoda Kwabandithiyileyo ibandla, amaKristu atshutshiswe.
Njengoko abantu bakaThixo, uvuyo lwethu ayisekelwanga indlela abantu abasabela ngayo kwisigidimi. ukuzithemba kwethu yeVangeli ayisekelwanga kwindlela abantu kubumelwane bethu kusabela kuyo. Oku kusekelwe ubuqaqawuli ubizo ngokwayo.
Yinto kungakholeleki ukuba abantu kweli gumbi bathathe inxaxheba ubulungiseleli nobuqaqawuli ngaphezu entsimini lukaMoses. Ngaba ukuqonda ukuba? Ngenxa nje bengaboni ezintle zabo ngokwaneleyo, kodwa sifumana ukubaxelela Lowo. Siyazi kakuhle loo mntu. Sifika ukunceda abantu ukubona uzuko lukaThixo, uyayihlaza! Sifumana ukukhokela abantu ebusweni bukaThixo.
amaKristu, kufuneka singalahlekani intliziyo. Andifuni kuthetha ukuba akufunekanga ebuhlungu ubumnyama kwelizwe lethu. Ndiya kuthetha kuphela ukuba singabi udakumbe angayiphosa ngetawuli. Bangazamkeli umyalezo, kodwa loo nto ayithethi kwenza na nobuqaqawuli ngaphantsi.
Musa elirhoxisa. Musa ningethi.
B. Mlahle ehlaza ezifi- Iindlela
“Sisuke sazilahla elihlazo, ngeendlela ezifihlakeleyo.”
UPawulos baye batyholwa ngokuba ezimdaka kunye yokuzingca. isimo sakhe wayeze umbuzo. Ngoko UPawulos uthethelela ngokwakhe, intetho, "Hayi, siye sazilahla ukuba. Thina akuyi ifihla izinto kwaye Singabhalwa ngendlela esisebenza. "Ufuna ukuba bazi ke ukuba uzimisele ukuphila ngendlela kokuzifaneleyo yeVangeli.
Oku kuvakala kakhulu ngathi oko wathi 2 Korinte 2:17, 'Ngokungafaniyo abaninzi, thina musa peddle ilizwi likaThixo ngenxa yenzuzo. Okuphikisanayo, kuKristu Sithetha phambi uThixo ngokunyaniseka, ezifana wathumela amadoda avela kuThixo.”
UPawulos uyaqonda ukuba yeVangeli Kufuna ukuba siphila ubomi bethu ngendlela ethile. Kwaye xa musa nto uyayityeshela ubulungiseleli bethu. Yena uyaqonda ukuba asikwazi ndingazishumayeli iVangeli, uze uxelele abantu ukuba baguquke isono, ngaphandle ukuphila ubomi lwenguquko ngokwethu.
khangela, ukuba wena ukwabelana iVangeli nabantu, kodwa ke abo bantu efanayo jonga ubomi bakho lonakele, nale usebenza nxamnye yeVangeli. Kwaye becinga lo yeVangeli akufuneki enamandla uthi ke, bekungasizathu sini ukuba nomonakalo okanye nguye ezingathethekiyo.
C. Musa Ukuzikhohlisa okanye abhucabhuce iLizwi likaThixo
Emva koko uPawulos uthi, "Siyala ukuqhelisela wengcibi okanye abhucabhuce ngelizwi likaThixo." Okanye njengoko INIV uyibeka, "Thina musa ukusebenzisa inkohliso, singaligqwethi ilizwi likaThixo.”
uPawulos uthi, akavumi ukuba ndinobuqhetseba okanye ezingathethekiyo kunye neLizwi. Uye nangoku zithethelela indlela isebenza. UPawulos akayi kwenza nantoni ubhucabhuca okanye utshintsho okanye amanzi phantsi iLizwi likaThixo. Mhlawumbi kuvakala ngathi yinto ecacileyo, kodwa eneneni zingacacanga kangaka.
Akwaba Abashumayeli namhlanje kuba kwesi sigqibo, ukuba bazichaze iLizwi likaThixo. Kukho bubudenge kakhulu apho. Xa ucinga ngoko ibandla ufanele ube yinxalenye, qiniseka ukuba sishumayela ngeLizwi. Qinisekisa ukuba akuyi ukudibanisa okanye ukuthabatha kude kuyo. abantu abaninzi kakhulu ndiyakhele igama ngokwabo ngokuthi zenze iLizwi likaThixo. UPawulos wathi yena akayi kwenza nto.
Ndiyazi amaxesha sonke sihendwa ukuyenza nangona. Akunyanzelekanga ukuba ube umfundisi okanye umshumayeli TV kuphembelele iLizwi. Ziziphi ezinye iindlela nani nilingeke abhucabhuce iVangeli? Ukwenza ngathi ayiginyeki kakhulu? Andithethi ngesono? abantu ezithembisayo izinto uYesu akazange Bebathembisa?
Yinto enjani enjengale. Ngaba wakha kwindawo isidlo okanye into kwaye uhlale phantsi etafileni uze uthabathe undirhabulise leti ebandisiwe kwaye oko unsweetened? Musa ukuba esaa? Kutheni iti ice unsweetened bezikade? Akukho mntu uthanda ukuba. Ke ngoku wenzantoni, uthatha ngathi 18 ipakethe iswekile uzame ukwenza esimnandi, kuba tea unsweetened yanto.
Ngendlela efanayo, abantu babone Vangeli njengoko mathe, akukho elithozamisayo ngokwaneleyo ungcamla abantu incasa. Ngoko ke kongeza kuyo. Baqikelela logama nje musani ngokupheleleyo yokuyisusa ukuba kulungile. Kunoko bafuna ukuxuba enye into apho nayo, ukwenza abantu ngakumbi. Le nto amanwele ukwenza! Kwaye ityhila indlela ubona iVangeli ngokwenene.
Uziva u nga imfuneko abhucabhuce into ngaphandle ucinga ukuba iphosakele okanye ayanelanga. Nawuphi na umzamo hamba neLizwi likaThixo sisithuko kuye nendlela Usisindisile.
D. State Inyaniso ngokusekuhleni, Mabuze Ngaphandle Kwabanye
“Kodwa ingxelo open inyaniso siya siyawaqala siziyaleze isazela wonke emehlweni kaThixo.”
YeVangeli Kwanele. Chaza inyaniso ngokusekuhleni, ngokuphandle. Ayenzi nabani na okulungileyo iqhinga kubo ukholo abathi. Ukongeza inyaniso uvelisa izigqubuthelo; akuwususi kubo. Ukuba umntu wasetyhini eyinzwakazi, kutheni asisibeke isigqubuthelo? Oko akwenzi ukuba nomtsalane; Kaloku ifihle ubuhle bakhe bokwenene. Musa ukuzama ukubeka ukwenza phezu iVangeli ngoko kuya kuba cute. Makhe lona ukuba uzuko inyaniso kaKristu zikhazimla.
Nokuba phakathi ukulahlwa, kufuneka elirhoxisa asimele. Asimele ukuphila ngendlela iyangquzulana umyalezo, yaye asifanele ukutshintsha umyalezo ukuzama ukwenza abantu abafana ngayo. Kufuneka ngokusekuhleni sishumayele iLizwi likaThixo, kuba sifuna ukubona uzuko uThixo oyinyaniso.
Kodwa akukho lula oko. Kaninzi kubonakala ngathi nje nga wu fumani.
II. Balumkeleni Umsebenzi kaSathana
Kufuneka bazi isebenza njani uSathana. Kukho iingcamango ezininzi ngaye. Abanye abantu baye ngokugqithileyo yokucinga ukuba uSathana Ngokusisiseko onamandla onke. Yonke into eyenzekayo ngenxa yamandla akhe amakhulu, waza yena angenza nantoni na athanda xa ufuna ukwenza loo nto. Ke kukho abathile abaya kwesinye ngokugqithileyo. Bexoka bakholelwa ukuba uSathana mhlawumbi ayisekho okanye ukuba nguye ndingenamandla kwaye engasebenziyo. Zombini ezi ukuphuncukelwa ubuxoki kwaye iyingozi sikholelwe.
Inyaniso uSathana linaso amandla, namandla ngokwaneleyo ukuba babecebe uPawulos kubulungiseleli bakhe. Mamela kwivesi ezintathu ezine.
“Kaloku ukuba iindaba ezimnandi esizishumayelayo azicacanga, koba azicacanga kuphela kwabo baya kwantshabalalo. Kwimeko yabo uthixo weli phakade wazimfamekisa ngaphakathi kwabo iingqiqo zabangakholwayo, ukuba ubagcine kuyo ndibona isikhanyiso seendaba ezilungileyo zobuqaqawuli bukaKristu, ongumfanekiselo kaThixo.”
A. Abanye Musa Bona yeVangeli
Kubonakala ukuba enye yezinto ezaye zigxekwa nxamnye uPawulos ukuba uyazifihla isigidimi sakhe kwabanye, ukuba ukugcina abanye abantu ekuyibukeleni. impendulo kaPawulos, ukuba umyalezo isithele kwabanye, loo nto ifihlakeleyo kwabo kwabatshabalalayo. Ithetha ntoni le nto?
UPawulos uthi abantu abangakwaziyo ukubona ubunyani umyalezo abantu efanayo batshabalalayo. Oku kwacaca xa 1 Korinte 1:18 xa uPawulos uthi, "Umyalezo lomnqamlezo libubudenge okunene kwabatshabalalayo…" Ukhangeleka osisiyatha kubo. akukho abanye abantu ndaweni zokubona ngokomoya, abaphila ukholo kwizithembiso zikaThixo, oya ilifa ubomi obungunaphakade, lowo ucinga ukuba iVangeli usisiyatha. Abo bantu azikho.
Uza kubohlwaya abo bangamaziyo uThixo, nabangazithobeliyo iindaba ezilungileyo zeNkosi yethu uYesu. baya kuva ukubethwa, intshabalalo engunaphakade ayivale ebusweni beNkosi kwaye ukusuka ubungangamsha bamandla akhe ngomhla yeza kuzukiswa ngabantu bakhe abangcwele, imangaliseke kubo bonke abakholwayo. (2 kwabaseTesalonika 1:8-10i)
Lo umdlalo ukuba badlale. Le ubulungiseleli bubomi okanye ukufa ubulungiseleli. Abo ndiwulahle lo myalezo we Vangeli, sachasa. Kwaye abo uMale iya kutshabalala kohlwaywa ngonaphakade.
B. USathana Blinds kholwayo
Kodwa kutheni le nto abantu? Oku kulapho uSathana uzayo. UPawulos uthi kuye "Uthixo weli hlabathi." Ngoko ke kucacile ukuba unamandla ezinye, kodwa onke amandla. Yena kuthiwa uthixo weli hlabathi okanye kule minyaka, kwaye kule minyaka kuphela.
Ke kaloku, njengokuba sisazi uSathana AKAKUTHANDI kuthi. Isibhalo uthi uhamba emhlabeni efuna ubani unokusiqwenga. Nguye Utshaba lukaThixo (ayilungelelene), nalowo yasikhuphayo sikholelwe ubuxoki endaweni yenyaniso kaThixo. Ngoko ke yintoni uPawulos uthi uSathana apha? UPawulos uthi aba bantu kwabatshabalalayo, okanye njengoko ubabiza, abangakholwayo, aziboni kuba uSathana ulahlekisa kubo.
Oku kufuneka ubungqina ngendlela emangalisayo yaye kubalulekile kuthi ukubona uzuko lukaThixo. Ukuba enye yeenjongo kaSathana eziphambili kukugcina ekuyibukeleni kuthi. USathana uya kangangoko ukuba singakuboni ukuqinisekisa asikwazi ukubona uzuko lukaThixo kwiVangeli.
Yintoni na uzuko lukaThixo? Uzuko kuThixo ubunzima wakhe, ubuhle bakhe, ubungangamsha, ubungangamsha, ubukhulu, nokubengezela. Kwakhona kakhulu yokwenza igama lakhe, adumileyo, kwaye ubukho phakathi kwabantu baKhe.
Abanye bethu bacinga Eyona njongo kaSathana ukusiwisa kunye iphiramidi okanye olube iliso enye album artwork indawo rapper ngayo. khangela, Eyona njongo kaSathana ukuba kuqhatha ukuba aye Illuminati kunye album rap. Eyona njongo kaSathana ukunilondoloza ningabi ukubona uzuko lukaThixo kuKristu. Kwaye yiloo nto sifuna abantu ukubona. USathana babecebe nathi. USathana utshaba lwethu notshaba unobangela kaKristu.
USathana ufuna ukuba sibe bangcangcazele uzuko lukaThixo. Ufuna ukuba enamored kunye nozuko kweli hlabathi. Ufuna ukuba kuhlanganiswa ngemali, nokuthandwa, nolwalamano olugqibeleleyo, kunye nempumelelo. USathana ufuna ukuba kwanela oko okwethutyana, nozuko basemhlabeni, ukuba singabi nalo ixesha sikhangele ukuba kuzukiswe uThixo. Kodwa akwanelanga kuye zisiphazamise - okunene siyabamfamekisa kuthi.
Ngaba sele uvumela uSathana ukuba nina zimfama kwaye kukuthintela ngokujonga uzuko lukaThixo? Ngaba ekuwasukeleni Uzuko kweli hlabathi endaweni yozuko lukaThixo? Ukuba kunjalo, udlala esandleni sakhe waza wenza kanye oko afuna ukuba senze. Yiyo loo nto njengoko nikholwa kuYesu, kuba sifuna abantu ukubona uzuko lukaThixo, ukuba baya kukholosa uKristu, bamzukise uThixo kubomi babo, kushumayela iVangeli.
Abanye bethu uyazibuza ukuba kutheni ihlabathi lethu bumnyama kakhulu ngoku. Kutheni abantu kangaka sisono, ezithiyekileyo omnye komnye, kwaye butshaba kuThixo. Kulungile nantsi impendulo. Bona ukuba ungaboni. Mhlawumbi ukhe benincokola umhlobo okanye ilungu losapho iminyaka kungekho nkqubela kwaye ube udiniwe. Kubonakala kungenakwenzeka. Asimele sicaphuke nikuyeke abantu. Ukuba uThixo kungonga, Yena unako ukusindisa nawuphina umntu! Ukuba uThixo kundisindisa, Yena unako ukusindisa nawuphina umntu. Beemfama, kwaye kufuneka ubone. Bancede babone.
Oku kubonisa ukuba xa abantu kuyala iVangeli, oko akuthethi umyalezo sineziphene nayiphi ngaphezu kuthetha phanya sineziphene ukuba indoda eyimfama akuthethi qaphela ukuba khanyisa emehlweni akhe. Abantu abaziimfama ababoni.
Musa ukuvumela ukulahlwa kukwenza uzithandabuze iLizwi. Into yokuba abantu abaziimfama ababoni ukuba wawumhle Mona ULisa, akuthethi ukuba akukho entle. Asazi ukusekela iimbono zethu yobugcisa abantu abangakwaziyo ukubona.
C. UYesu ongumfanekiselo kaThixo
UPawulos uthi USathana ulahlekisa ukuba angaboni "Isikhanyiso seendaba ezilungileyo zobuqaqawuli bukaKristu, ongumfanekiselo kaThixo. " Le nto eshumayela Kristu ubonisa abantu uzuko lukaThixo, ngokuba uYesu Kristu kanye ongumfanekiselo kaThixo.
UYesu nje umprofeti kaThixo. Yena nje umntu othunyelwe evela kuThixo. Yena nje uNyana kaThixo. Nguye kanye ongumfanekiselo kaThixo. Ithetha ntoni le nto? Oku kuthetha ukuba uYesu, ukuba uThixo ngokwakhe, na ukumelwa ogqibeleleyo uYise. Ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni uthando lukaThixo ifana, khangela uYesu. ngenceba kaThixo? Khangela kuYesu. UThixo uvakalelwa njani ngayo aboni? Khangela kuYesu. UYesu unguThixo ngokwenyama, umfanekiso ogqibeleleyo.
Kwindalo ebonakalayo sibona imisebenzi kaThixo, kodwa ngoKristu Yesu ukuba uThixo ngokwakhe, Emmanuel, "UThixo unathi." Le kobuqaqawuli bukaThixo ebusweni bukaYesu Kristu yeyona kamnandi esekuhleni, kuba bayazi ukuba nje iimpawu zikaThixo akukho, kodwa uThixo ngokwakhe kukho. - Charles Spurgeon
Akukho namnye owakha wambona uThixo, kodwa uThixo Lowo kwaye kuphela, lowo usesifubeni sikaYise, nguye ocacise. (John 1:18)
Ngoko, xa amadoda ukubona isikhanyiso seendaba ezilungileyo zobuqaqawuli bukaKristu, baya kumbona uThixo uzuko lwakhe. USathana akafuni ukuba babone ukuba.
Sishumayela iVangeli ukuze abantu bakwazi ukubona uzuko. Kwaye uzuko ibonwa uYesu.
amadoda Ngoko uSathana uye wazimfamekisa, Yintoni omele uyenze? NguSathana "uthixo weli hlabathi." Yintoni omele uyenze xa Uyeza nxamnye nathi?
III. Bamkela Umsebenzi yoMphathiswa
Omnye abaninzi kuthi izizathu uyasokola lokushumayela kukuba lungazi ukuba bendikhe ngokuba senze ntoni.
“Kuba into sivakalisa thina ziqu, kodwa uYesu Kristu iNkosi, kunye thina sizivakalisa ukuba singabakhonzi benu ngenxa kaYesu.”
UPawulos uthi, abantu bangafuni isigidimi sam kuba abakwazi kumbona uKrestu. Kwaye uKristu thina ukushumayela. A zi bandigibe, kodwa yena.
A. bamazisa uKristu!
Njengomlungiseleli yeVangeli, ukuba umsebenzi omnye zaseprayimari. uKrestu abamshumayeli. Siqhubeka zixinge, kwaye ziyabhidisa, kwaye utyhafe, kuba sifumana kude into eziphambili. Xelela abantu ngoYesu.
Xa kokuba udibane nomntu lowo ulahle, kungekho themba, ngaphandle uThixo uze uzibuze ukuba yintoni ofanele uyenze. Xelela loo mntu ngoYesu. Nantso into ekufuneka. Ewe nezinye iimfuno. Kodwa intswelo yabo iphambili nguYesu.
Ukuba ufuna ngokwenene amadoda ukubona uzuko lukaThixo, oko kubo akukho okulungileyo ukushumayela ezinye izinto. ngoku oko akuthethi musani ukunceda abantu baphile ubomi babo kakuhle, nto kanye lithetha uKristu ukuba abe kwiziko elo. Ukuba uYesu na isiseko, izizathu, amafutha ngasemva yonke into thina ukushumayela, into esiyenzayo, aziyi kuhlala.
Kuthetha ukuthini ukushumayela uKristu? Siyazi abasuka isicatshulwa kwenye indawo eZibhalweni ukuba uPawulos wayebhekisela umyalezo yeVangeli. UPawulos wathi kwabaseKorinte: "ndagqiba kwelokuba ndingazi nto phakathi kwenu, ingenguye Kristu, naye ke ebethelelwe emnqamlezweni." UPawulos uthetha umyalezo ngoYesu into sokuba kwenziwe oko nendlela usisindisele.
Ukuba ulapha ngokuhlwanje kwaye awuyazi ukuba isigidimi yeVangeli, ke ukuba usukelo lwakho phambi ushiya. Bana phandle yeVangeli kwaye ukholelwa ukuba noba okanye hayi. Zingundoqo lo myalezo yeVangeli, ke inyaniso yokuba uThixo ungcwele, eziphambili ungumoni, Kristu igqibelele, wafela aboni, wabuya wavuka emangcwabeni. Kwaye abo babuya esonweni nokuthembela uKristu baya kusindiswa. Yiloo umyalezo ukhule ubizelwa ukushumayela.
Awukwazi ukusindisa abanye. Awukwazi kufa nabani. Awukwazi ukutshintsha intliziyo nabani. Uyakwazi bamvakalisa uKristu kuphela. Musa ukuzama ukusindisa abo, ukubaxelela kanye lowo unako. Musa ukuzama ukutshintsha iintliziyo, ukubaxelela kanye lowo unako. Musa ukuzama ukuya ndiyazicoca, ukubaxelela kanye lowo unako.
Kutheni yeVangeli? Kuba le yindlela uThixo unyule abantu, xa besiva iindaba ezilungileyo. Kwaye ngokucacileyo kwesi sicatshulwa, ukuba uzuko lukaThixo ngokucacileyo iindaba ezimnandi zoNyana wakhe.
Kanye kule veki igqithileyo, Ndeva izingqiniso ezimbini ukusuka amakholwa ecaweni yam. Aba bantu emibini amabali ezahlukeneyo kakhulu. Omnye kumthengisi iziyobisi lowo evalelwe. Omnye intombazana entle, londithiyayo uThixo. Bobabini iVangeli wabelana nabo izihlandlo ezininzi. Kwaye abazange àbakholwa. Yaye niyazi ukuba yintoni ada ukuba bandithembe uKristu? Omnye umntu wabelana iVangeli nabo. Asiyazi xa uThixo uza kusebenza, okanye indlela uThixo uza kusebenza. Thina nje kufuneka senze umsebenzi wethu. Xelela abantu ngoYesu, ukuze babone ubuqaqawuli bukaYesu.
Kuba zona iintonga esiphuma ngazo umkhosi, azizezenyama kodwa amandla kaThixo ukutshabalalisa iinqaba. Sitshabalalise iingxoxo kwaye zonke izimvo ephakamileyo ephakanyiswa nxamnye nolwazi lukaThixo, uthabathe zonke iingcamango zithobele uKrestu, ukuba ukulungela ukohlwaya yonke ukungathobeli, xa ukululama kwenu ngokupheleleyo. (2 Korinte 10:5-6)
Abanye bethu Ndingathanda ukwabelana izingqiniso zethu, leyo intle. Kodwa xa iVangeli akakho langoku bavakalisa ukuba uKristu, kodwa ukuzeyisa. 'Waye- crackhead, ke mna ndandingekho. "That's ibali intle, kodwa ndiya kusindiswa njani?!! Enoba kuthetha ukuba okanye hayi, oko ukushumayela ngokwakho. Senza kanye loo nto uPawulos uthi yena akenzi kwesi sicatshulwa. Nceda ukwabelana ubungqina bakho, kodwa ukubaxelela iindaba ezilungileyo ozigcine.
B. Yiba ngoMsebenzi abo badinga Inyaniso
Ziziphi iindlela oye benincokola iVangeli mva? Ngubani na benincokola? Ucinga ukuba uthethe ngayo xa ndihleli esitulweni iinwele, okanye xa ibinokwenziwa iinwele zakho? Ngaba uthini na wena kubamelwane bakho okanye ophangela nabo xa ufumana imizuzu embalwa ukuba bathethe ngezinto?
Ukuba igama ngokuthi ngabakhonzi, ngokoqobo lithetha ikhoboka. Uye wathi ndivakalisa uKristu njengoko iNkosi, kwaye ndibe likhoboka lakho, ngenxa kaYesu. Yiloo nto imangalisayo. Kwaye akukho xesha kuphela uPawulos uthi into enjengale.
Nangona mna ivideo kwaye lilungu akukho mntu, Ndiyaziqondakalisa ngokwam likhoboka bonke, ukuba kuphumelela abaninzi kangangoko kunokwenzeka. (1 Korinte 9:19)
Ngaba uzenza isicaka kwabo bafuna ukuba beve iindaba ezilungileyo?
Ngokuba umntu, ukuba beve yeVangeli kum, ntoni ukuba ibe kwimeko egqibeleleyo? Ndiya kuthemba. Ndifuna ukuba lube nenjongo, kunye ukuxhamleka ngokwam ukuba abanye bafumane kumkhawulela uKristu.
Abanye bethu uxakeke kakhulu. Siza kusebenza kakhulu, okanye sikhonze ecaweni kakhulu, kwaye musa ngonaphakade ukuchitha ixesha non-amaKristu. Ndiziva ngathi ukuba ngamanye amaxesha. Kodwa simele imshiye ngokuxelela abantu ngoKristu ukuya ithuba. Sifanele ukwakha ubomi bethu vangeli. Yenza imibingelelo ukuxelela abanye abantu ngoKristu.
Kazi ukuba ngubani kweli gumbi uza kwelinye ilizwe ukwabelana iindaba ezilungileyo? Kukho abantu abangamaziyo. Kukho abantu abaziimfama. Baphi bevangeli ezidolophini sikulungele ukuya kwenye?
Thina sishumayela uKristu, ukuze abantu babone uThixo. Kodwa yintoni injongo yokushumayela Kristu ukuba abantu abaziimfama?
IV. Ithemba Xa Umsebenzi kaThixo
Ukuba ihlabathi ukuba kushunyayelwa ekugqibeleni ixhomekeke kuthi, oko ngokoqobo akunakwenzeka. Asinako ukuvula amehlo eemfama. Zonke esinokuyenza bamazisa nothando kubo. Ngaba uThixo akafuni ukuba senze engenakwenzeka? Ingayiyo.
kwiZenzo 26:18, Uthi uPawulos uYesu, "Ndithumela kubo, ukuba uvule amehlo abo, babuye ebumnyameni, beze ebumhlotsheni, ebumhlotsheni; babuye egunyeni likaSathana, beze kuThixo, ukuze bamkele uxolelo lwezono, nendawo phakathi kwabangcwalisiweyo, ngokukholwa kum. "
Njani loo nto? Umntu akanako ukwenza ukuba. Mamela ndinyana 6.
“kuba uThixo, owathi, "Makuvele ukukhanya ebumnyameni,"Okhanyisele iintliziyo zethu, ukuze kukhanye ukwaziwa kobuqaqawuli bukaThixo ebusweni bukaYesu Kristu.”
A. UThixo yila Recreates
UPawulos kuthatha wesibini kusikhumbuza ngubani uThixo. Ufuna ukunika wasikhumbuza ekhawulezayo irekhodi yakhe kwingoma. Lo asinguye uThixo ngubani uzama ukwenza into emangalisayo okokuqala. Lo asinguye uThixo owazalelwa izolo okanye kwesigidi kwiminyaka eyadlulayo. Le nto uThixo wadala. Lo nguThixo ogama izandla libotshelelwe ekuthiwa-uthixo weli hlabathi. UThixo siya khona kwabanye abantu egameni lo Thixo owadala zonke ngokupheleleyo ukusuka akukho nto.
Ukuba unako ukwenza yonke indalo ngamazwi nje, Unokuza iimfama, abantu abafileyo ebomini.
amehlo emfama ethelekiswa Thixo wethu. iingqondo abangendawo ethelekiswa Thixo wethu. iintliziyo Dark akukho umdlalo uThixo wethu. Uthe, "Makubekho ukukhanya," kanye yaye unako ukuthi kwakhona. Nantso ingongoma uPawulos wenza.
Umfanekiso asisebenzisayo enjengale. iintliziyo zethu zifana igumbi elikhulu, oko pitch black. Iindonga zamafu. Akukho iifestile. Akukho izibane. akukho zibane. Akukho neengcango ukukhanya enyakanyakeni phantsi. Konke oku gumbi owakha ingazeki basebumnyameni. Uvangelo kuxa umntu umi ngaphandle elo gumbi mnyama kwaye ukungxolisa Kristu uyiNkosi. Kodwa ukukhanya nangoku akezi kwi. Ke aye kwenye icala ukhwaze, Wafa ngenxa yesono Uvukile! Ukanti akukho izibane. Kwaye ke ngelinye ixesha Iindaba elifanayo kwabelwana, kodwa eli xesha ibhola ukwaphulwa inceba kaThixo waphula lonke kwelinye kwaloo mabonda kunye okuqaqambe wena endakha ndayibona lucaca. Ukuba igumbi kanye mnyama ngoku kukhanyiseleka nayiphi na igumbi ndingaze ndibe. Kuthatha uThixo ukuyenza loo.
ngumKristu, ukuba siyibonile kobuqaqawuli bukaThixo ebusweni bukaYesu, ukuba niwalile ebumnyameni, beze ebumhlotsheni, oko kungaphumi kuni. Andifuni ekugqibeleni ukwenza umntu ekwabelwana nawe. Yinto ukwenza kaThixo. NguThixo kuphela onokuyenza loo nto. Nangona uthixo weli hlabathi siyabamfamekisa nasebuqaqawulini uYesu kuthi, uThixo oyinyaniso ophilayo ukhanye ukukhanya ezintliziyweni kwaye avule amehlo emfama. Kwaye usebenzisa iLizwi lakhe ukwenza oko.
Ukuba intliziyo yakho kuphinda mnyama ukuba abonisa njani ebomini bakho?
C. Ngokujonga uYesu rhoqo mbulelo
Ngaba uyakuqonda oko uThixo akwenzele zona? Ininzi kuthi, umntu kuqukwa nam, bangabi namonde ngokwaneleyo malunga lwalemihla, kuba awunguye nombulelo ngokwaneleyo ukuba sifumana ukuba kondela uzuko lukaThixo kwiVangeli. Ukuba abanjwa ngaphezulu, kwaye mincili uThixo wethu saza into esinayo kuKristu, besiya kuxelela abanye abantu. Siya ukubaxelela ibonisa esithanda, kunye albums elungileyo, kunye neenkomfa. Ngaba kulo Yesu? Xa simthanda into, asinakukwazi ukunceda koko wabelane nabanye.
ngumKristu, Ungathatha ingqalelo into ayenzileyo uThixo. Emanzini wena ngaloo yeVangeli, kodwa uThixo nangoku ebonisa uzuko zaKhe apho, ebusweni kaKristu. Oku akupheli xa uthembe. Musa ukuzama elidlulileyo iVangeli ukuya! Oku kulapho sibona uzuko lukaThixo kakhulu ngokucacileyo. Oko konke sibhalo sibonisa ntoni ukuba.
Indlela uThixo esisodwa uthando lwakhe kuthi. UThixo sathululwa ngokobutyebi bobabalo lwakhe phezu kwethu. UThixo wabonisa umonde kunye nathi. UYehova uyasibonisa wazenza. iimfama endabakhuphayo emehlweni iye kwakhona musa ukuhamba jikelele bagwebi. Unamehlo. Ngoko khangela.
Xa wena udimazekile, khumbula ukuba ngubani wena ukhonza. Gcina eshumayela iVangeli. Thina sishumayela uKristu ukuze abantu bakwazi ukubona uzuko.
Ubulungiseleli kweli hlabathi ezimnyama iwile akuzange, kwaye akasayi kuba lula. Kodwa singafunda kuPawulos. Sinokufunda, Ekuqaleni, ukuba elirhoxisa ngenxa ngokukhatywa babantu. Isibini, mabalumkele umsebenzi kaSathana. Isithathu, ukuba amkele umsebenzi umphathiswa. Isine, ukuba ndithembele umsebenzi kaThixo.
Ingaba ndingenza ntoni xa ndinganyulwanga ukuba ukushumayela kangangoko zifanele okanye ukuba ndiya kuba yeVangeli? Andifuni ukuba ushiye udimazekile yakhe. Khangela ukuba uKristu. Ndifuna ukuba ushiye bayakhuthazwa apha, oko uThixo akwenzele zona kuYesu. Kwaye ufune ukuxelela abanye ukuze bakwazi ukufumana enye.
Kukho kakhulu kukuba yintlanga ukuba sihambe ngeenxa bazisole ngokwethu. eninzi kakhulu busengozini.
Kukho iinketho ezimbini kuphela xa obu bomi phezu. Abo kuthi bangakholwanga ukholo lwethu kuKristu, uya kutshabalala. Ukuba asiyi sitshintshe ingqondo ngesono, Yiyeke, ulilahle ngokwethu phezu nenceba kaYesu, siza kunyamezela batshabalale ngonaphakade.
Kodwa ukuba bajike, sithembele kuKristu, sifumana ukubona tshe uzuko lwakhe ngoku yeendaba ezilungileyo zikaKristu. kwaye emva, emva kokuba ubuyisela, sonke uya kufumana imizimba ezintsha. Kwaye uya kondela uzuko lwakhe ngokupheleleyo, ngonaphakade. Oko kunobuqaqawuli. Kukho kakhulu busengozini. Gcina eshumayela iVangeli ukuze abantu bakwazi ukubona uzuko lukaThixo ngonaphakade.
emakhulu Duba • EyeThupha 22, 2013 ngexesha 1:55 pm • impendulo
Mna e Lona weva ushumayela lo myalezo. I ngempela ugxininiso kwi Ivangeli kwaye bakhuthazwa ukuba abantu abaninzi kangaka zakwazi kuyo. Kwathiwa enecala kwaye lakheke emphefumlweni wam ngokobuqu. Enkosi, Bro!
ufefe & Peace,
jay • EyeThupha 22, 2013 ngexesha 8:35 pm • impendulo
Khumbula amaKristu abangenamakhaya mna ndandinixelele guys malunga? Bafuna uncedo.. Nawuphi na uncedo kuba guys kakhulu. UThixo uya kubonelela kodwa uYesu ukwenza imisebenzi apho kwakungekho lukholo. Wonke LA liyajikeleza ikhosi ngenxa yokuswela kwabo ukholo. Lets ukuxhasa ubukumkani kwaye oko sinako. Bakwenza umculo kunye uMoya ngokwenene uthetha amazwi abo. Ikuvumela ndii into yokuba kwakunye! Sikwenza oku kuba ubukumkani y'all. email livin4christ4lyfe@gmail.com .. Lets ukunceda abazalwana. Thanda nonke. kwaye uhambo, sicela uncedo.. Ukuba ufuna ukubona iziqhamo zabo.. Jonga YouTube.com/livin4christ4lyfe ..
PJMadsen • EyeThupha 23, 2013 ngexesha 4:43 mna • impendulo
Wowu! Oko kwakulungile ngokwenene! Andikwazi ukulinda ukuba wabelane nabahlobo bam! Enkosi! Ngokwenene Ndingathanda ukuba uyakwazi enizivayo nenizibonileyo it on youtube…kwaye kananjalo ukufunda intshumayelo njengoko Trip Lee uthi ngaphantsi ividiyo! “UThixo asisikelele wonke.”
Khankanya: Oh u preachin' ngoku? @ TripLee116 kuzisa ilizwi kwinginginya ... - UrbanGospelEntertainment.com @UrbanGospelENT
Shauneil • EyeThupha 23, 2013 ngexesha 8:22 pm • impendulo
umyalezo Excellent. ebhalwe kakuhle kwaye incazelo elula. Iphi na iqhosha bhalisa? Andifuni ukuba ukuba uyaskrola onke amaphepha am ukuze ufumane iposi yakho. :-) Ukuze miss it.
SdoubleU • EyeThupha 24, 2013 ngexesha 6:14 pm • impendulo
Siyabonga kulo myalezo. Yaba into ndim ukuva. Le website Kuye kwalukhuthazo olukhulu kum. Inkosi ikusikelele!
Amarie • EyeThupha 25, 2013 ngexesha 9:02 mna • impendulo
I looooooooooooove iti unsweetened elibandayo! ;-)
DJ • EyoMsintsi 11, 2013 ngexesha 6:43 pm • impendulo
I, uhambo! Siyabonga dude! Umyalezo wakho zizwana-iyandinceda. Ndiye ndizame kakhulu uze mva nje yaye oku kwabanceda nje.